POLITIKA MAHARITRA | LIGSERUVENI.COM - HAFA
Politika momba ny tsiambaratelo (ivelan'ny EU)
Politikan'ny cookie (ivelan'ny EU)
Fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ho an'ny mponina ao California
Politikan'ny tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa EU
Politika Cookie ho an'ny mpampiasa EU
POLITIKA MOMBA NY FIVORIANA (ivelan'ny UE)
Daty mahomby: 25 Mey 2018
Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, ireo mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa aminy (ny 'Hundeshagen' , 'we' na 'us' ) manome lanja ny tsiambaratelo momba ny mpampiasa sy ny mpanjifa. Miezaka izahay mba hahay mangarahara momba ny fanangonana sy ny fampiasanao ny mombamomba anao, hitazomana ny mombamomba anao ary hanome anao safidy manan-danja. Ity politika manokana ity ( 'Politika' ) mamaritra ny fomba fiainana manokana momba ny www.ligseruveni.com tranokala (ny 'Site' ), izay tompon'ny sy ny Hundeshagen. Ity politika ity dia natao hanampiana anao hahalala izay mombamomba izay angonin'i Hundeshagen, ny antony anangonana izany ary ny zavatra ataonay amin'izany.
Ity politika ity dia mihatra amin'ny fomba fampahalalana an-tserasera momba ny tranokala ho an'ireo mpampiasa rehetra ankoatry ny mpampiasa ao anatin'ny Vondrona Eropeana. Ity politika ity dia tsy mihatra amin'ny angona manokana nangonina tamin'ny alàlan'ny tranokala na fampiharana fahatelo, anisan'izany ireo tranonkala azonao alefa amin'ny alàlan'ny tranokala. Ireo tranonkala sy rindranasa ireo dia mety manana ny politikany manokana, izay amporisihinay anao hamaky alohan'ny hanomezana mombamomba anao manokana na amin'ny alalàn'izy ireo. Fanolorana sasantsasany amin'ny tranokalanay, mety misy fanamarihana fanampiny momba ny fomba fanao sy ny safidy. Azafady mba vakio ireo fampahafantarana momba ny tsiambaratelo fanampiny hahafantarana ny fomba mety hampiharany anao.
Azafady mba vakio tsara ity Politika ity hahafantarana ny politikantsika sy ny fomba fanao mikasika ny mombamomba anao sy ny fomba hitondranay azy. Raha tsy mifanaraka amin'ny politikanay sy ny fomba fanaonay izahay dia aza mampiasa ilay tranokala. Manaiky an'ity politika ity ianao amin'ny fampiasana ny tranokala. Ity politika ity dia mety hiova indraindray. Ny fitohizanao ny fampiasana ny tranokala aorian'ny fanovana nataonay dia heverina ho fanekena ireo fanovana ireo, koa mba zahao azafady ny Politika isaky ny misy fanavaozana.
ZANAK'IZAO 13 taona
Ny tranonkala dia tsy natao ho an'ny zaza latsaky ny 13 taona, ary tsy manangona fahalalana mombamomba ny ankizy latsaky ny 13. izahay raha fantatsika fa nanangona na nahazo fampahalalana manokana avy amin'ny zaza latsaky ny 13 taona izahay nefa tsy nanamarina ny faneken'ny ray aman-dreny, dia hamafa izany vaovao izany. Raha mino ianao fa mety manana fampahalalana avy aminay na momba zaza latsaky ny 13 taona izahay, dia mifandraisa aminay privacy@ligseruveni.com .
Fampahalalana izay angoninay ary ahoana no fomba hanangonana izany
Azonay angonina ny mombamomba anao sy momba anao rehefa mifanerasera sy mampiasa ilay tranokala ianao. Ity fampahalalana ity dia mety misy ny mombamomba anao (ohatra anarana, adiresy mailaka, adiresy paositra, nomeraon-telefaona ary ny antsipirian'ny fifandraisana rehetra), ny fampahalalana ara-teknika (oh: ny adiresy IP, ny karazana browser, ny famantarana ny fitaovana) ary ny fampahalalana momba ny fampiasana (oh: ireo pejy notsidihinao, ny doka tsindrioo amin'ny). Azontsika atao ny manambatra ireo karazam-pahalalana ireo, ary miara-manondro ireo fampahalalana rehetra ireo ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity 'Fampahalalana' . Ny angona dia azo angonina araka ny voalaza etsy ambany sy amin'ny alàlan'ny fampiasana cookies, jiro web, piksel ary teknolojia hafa toa anay na avy amin'ny orinasa hafa misolo tena anay. Ireto ambany ireto ny karazana fampahalalana azontsika angonina:
rehefa misoratra anarana amin'ny na mampiasa ireo tranokala ireo ianao, na misoratra anarana amin'ny serivisy rehetra ao amin'ilay tranokala, dia mety hangataka aminao izahay hanome fanazavana manokana hahafantarana anao, toy ny anarana, adiresy paositra, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, na antsipirian'ny fifandraisana hafa.
rehefa mampiasa ilay tranokala ianao hifandraisana amin'ny hafa na handefa, hampakatra, hampiseho na hitahiry izay atiny rehetra toy ny fanehoan-kevitra, sary, horonan-tsary, mailaka, fametahana, fampidirana am-peo, ary atiny hafa novokarinao (miaraka, 'Fandraisana anjara ho an'ny mpampiasa') ampahibemaso faritra amin'ny tranokala. Ireo mpampiasa anao dia mety ampitaina amin'ny hafa ary tsy azonay fehezina ny fihetsiky ny antoko fahatelo izay nofidinao hizaranao ireo anjara ampiasain'ny mpampiasa anao. Tsy azontsika atao ihany koa ny manakana ny fampiasana bebe kokoa an'ity Fampahalalana ity rehefa ampahibemaso.
azonay atao ny mangataka aminao hanome vaovao rehefa miditra amin'ny fifaninanana na tohatra tohananay ianao na mamaly ny fanadihadiana izay azonao alefa ary mangataka ny hamenoana an'ity tranonkala ity.
rehefa mifandray aminay ianao mba hitaterana olana amin'ny tranokala, na fanontanina ankapobeny rehetra. Azontsika atao ny mitahiry ny firaketana sy ny kopian'ny taratasinao (ao anatin'izany ny adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, ary ny mombamomba anao manokana izay nomenao).
Rehefa misoratra anarana amin'ny serivisy misy karama ianao na mametraka baiko amin'ny tranokala, azonay atao ny mitazona ny antsipirian'ny fifanakalozana izay tanterahinao amin'ny alàlan'ny tranokala sy ny fahatanterahan'ny baiko rehetra (mariho fa mety takiana aminao ny hanome fampahalalana ara-bola alohan'ny hametrahana baiko. amin'ny alàlan'ny tranokala).
rehefa mampiasa an'io tranonkala io ianao, toy ny fangatahana fikarohana, tantaram-pizarana, fijerin'ny pejy, fijerena ny atiny omenay, na fametrahana ireo plug-in misy anay.
Fampahalalana teknika, fampiasana ary famakafakana.
Afaka manangona fampahalalana ara-teknika sy fampiasana sasany izahay rehefa mampiasa ny tranokalanay, toy ny karazana fitaovana, mpitety ary ny rafitra fampiasanao ampiasanao, mpamatsy fitaovana tsy manam-paharoa, adiresy IP, fikirakirana fitaovana ary fitetezana tranonkala, ireo pejin-tranonkala izay tsidihinao, anisan'izany ny mombamomba ny ny fomba fifandraisanao amin'ny tranokalanay sy ireo an'ny mpiara-miasa aminay antoko fahatelo ary fampahalalana mamela anay hahafantatra sy hampifandray ny asanao manerana ny fitaovana sy ny tranokala. Azontsika atao ny mahafantatra ny fitaovanao hanome anao traikefa manokana sy dokam-barotra manerana ireo fitaovana ampiasainao. Jereo ny Politikan'ny cookie fizarana raha mila fampahalalana misimisy momba ny fomba hampiasantsika ireo teknolojia ireo mba hanangonana izany vaovao izany.
Azonao atao ny miditra amin'ny lohatenin'ilay tranokala amin'ny alalàn'ny vondrom-piarahamonina fahatelo, forum, ary tranonkala media sosialy, serivisy, plug-in ary fampiharana ('tranokala media sosialy'). Ny fametrahana ny fiainanao manokana amin'ny tranokala media sosialy toy izany, ary koa ny politikany manokana, dia hamaritra ny mombamomba anao sy ny zavatra hafa azo zaraina aminay, na raisinay amin'ny alàlan'ny haitao fanaraha-maso media sosialy, rehefa miditra amin'ilay tranokala ianao, ary mety nangonina sy nampiasain'ireto tranonkala media sosialy ireto. Raha avelan'ny lalàna, amin'ny fanomezana an'ity Fampahalalana ity na raha tsy izany, mifandraika amin'ireo tranokalanay amin'ny alàlan'ny tranokala media sosialy, dia manaiky ny fampiasainay ny fampahalalana avy amin'ny tranokala sosialy mifanaraka amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ianao.
Fampahalalana momba ny toerana. Manangona fampahalalana tena izy izahay momba ny toerana misy anao, toy ny firenenao, rehefa manome izany ianao na amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fitaovana (toy ny adiresy IP), na ny toeran'ny fitaovanao rehefa miditra amin'ny tranokala miaraka amin'ny fitaovanao finday ianao.
Ahoana no ampiasanay ny fampahalalana nataonao
Mampiasa fampahalalana izay angoninay momba anao izahay na omenao anay ho an'ny tanjona voalaza ao amin'ity politika ity na nambara tamin'ny fotoana nanangonana na tamin'ny alalanao, anisan'izany ireto manaraka ireto:
Omeo na diniho ny fampiasanao ny tranokala sy ny atiny, ny vokatra, ny programa ary ny serivisy.
Fenoy ny fangatahanao sy ny tanjona hafa anoloranao izany, ao anatin'izany ny fifandraisana aminao momba ny fividiananao na ny fifanakalozana nataonao.
Manomeza fanamarihana momba ny kaontinao na ny fisoratanao anarana.
Mandefasa vaovao momba ny fampiroboroboana, ny tolotra ary ny endri-tranonkala.
Mampandre anao rehefa mandresy ny iray amin'ireo fifaninanana na takelaka famaranana ataonay.
Mampahafantaro anao rehefa misy fanavaozana ny tranokala, sy ny fanovana ny vokatra na serivisy atolotray na omenay na dia izany aza.
Omeo, amboary, tazomy, ataovy manokana, miaro, ary manatsara ny traikefanao sy ny fanatitray eo amin'ny tranonkala.
Tombano ny haben'ny mpihaino sy ny lamina fampiasana anay.
Tehirizo ny fampahalalana momba ny safidinao, ahafahantsika manamboatra ny tranokalanay mifanaraka amin'ny tombontsoanao manokana.
Hanafaingana ny fikarohana nataonao.
Miaro amin'ny, mamantatra, ary misoroka fisolokiana sy hetsika hafa tsy ara-dalàna
Fantaro rehefa mampiasa ilay tranokala ianao.
Manolora, mivarotra, ary manao dokam-barotra momba ny vokatra, programa ary serivisy avy aminay sy ireo mpiara-miasa aminay, mpiara-miombon'antoka ary misafidy antoko fahatelo mety hahaliana anao. Azontsika atao koa ny mampiasa ny fampahalalana angoninay hanehoana doka amin'ny mpihaino kendren'ny mpanao dokam-barotra.
Tanteraho ny adidinay ary ampiharo ny zonay izay azo avy amin'ny fifanarahana nifanaovanay sy ianao, anisan'izany ny faktiora sy ny fanangonana.
Mamantatra, manadihady ary misoroka ireo hetsika ao amin'ny tranokalanay izay mety hanitsakitsaka ny fe-potoanay, mety hosoka, manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, na lalàna hafa na mety tsy ara-dalàna raha tsy izany, mba hanarahana ny fepetra takian'ny lalàna, ary hiarovana ny zontsika sy ny zontsika ary ny fiarovana ny ny mpampiasa anay sy ny hafa.
NY FOMBA Hizaranay sy hamariparitana ny mombamomba anao
Azontsika atao ny mizara sy mamoaka ny fampahalalana nangonina sy voafaritra momba ireo mpampiasa anay nefa tsy misy fetra. Ho fanampin'izay, azonay atao ny mizara sy mamoaka vaovao izay angoninay, na omenareo amin'ireto fomba manaraka ireto na ho an'ny tanjona hafa ambara amin'ny fotoana fanangonana:
Miaraka amin'ny fanekenao. Azonay atao ny mampahafantatra ny mombamomba anao rehefa omenao anay ny fanekenao hanao izany.
Mpanome tolotra. Ireo mpifanaraka aminay, mpanome tolotra, mpamatsy atiny, ary antoko fahatelo hafa ampiasainay hanohanana ny orinasanay dia mety hanana fidirana amin'ny Fampahalalana ho fanampiana amin'ny fanatanterahana ny serivisy ataon'izy ireo ho anay, toy ny: famoronana, fikojakojana, fampiantranoana ary famoahana ny tranokalanay, ny vokatra ary ny serivisy; mitarika marketing, fikirakirana vola, mailaka ary fanatanterahana ny baiko; fitantanana fifaninanana; manao fikarohana sy analytics; ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Fananana vaovao. Ho an'ny mpividy na handimby hafa raha sendra misy fitambarana, fanodinkodinam-bola, fandaminana indray, fandaminana indray, famongorana na fivarotana hafa na famindrana ny sasany amin'ny fanananay rehetra, na amin'ny maha olana na amin'ny fatiantoka na fatiantoka na fatiantoka na fizotran'izany. izay fampahalalana izay tazoninay momba ny tranokalanay sy ireo mpampiasa dia isan'ireo fananana nafindra.
sisin-collie manga heeler Mix Info
Ireo tranonkala mifandray. Ilay tranonkala dia mety misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa, ao anatin'izany ireo tranokala media sosialy. Azontsika atao ny mampifandray ireo interface programme media sosialy na plug-ins ('Plug-ins') amin'ny tambajotra sosialy, ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest ary ny hafa, ao amin'ny tranokalanay. Ny plug-in dia mety hamindra ny mombamomba anao ao amin'ny sehatr'ilay Plug-in nefa tsy misy hetsika ataonao. Ity fampahalalana ity dia mety misy ny laharan'ny famantarana ny mpampiasa sehatra, tranokala misy anao, sy maro hafa. Ny fifampiresahana amin'ny Plug-in dia handefa fampahalalana mivantana amin'ny tamba-jotra sosialy ao amin'ny Plug-in ary mety ho hitan'ny hafa amin'io sehatra io ny fampahalalana. Ny plug-ins dia fehezin'ny politikan'ny fiainana manokana momba ny sehatra tsirairay, fa tsy amin'ny politikantsika.
Mpiara-miasa sy mpiara-miasa. Azontsika atao ny mampahafantatra ny fampahalalana amin'ireo mpiara-miasa, mpiara-miasa, ary antoko fahatelo (ohatra: mpivarotra antsinjarany, mpanao dokambarotra, masoivoho dokambarotra, tamba-jotra sy sehatra fanaovana dokam-barotra, orinasam-pikarohana ary orinasa hafa) izay tsy voarakitr'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ny fomba fanao, ary mety hanome izany, manolora, manatsara, mivarotra ary mifampiresaka aminao momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo manokana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidinao dia jereo eto ambany ireo safidinao. Afaka mizara fampahalalana sasantsasany amin'ny antoko fahatelo izahay mba hanomezana doka anao arakaraka ny zavatra tianao. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo Safidy doka etsy ambany.
Mpanohana sy fanentanana miaraka. Indraindray izahay dia manolotra atiny na programa (ohatra: fifaninanana, tsinontsinona, fampiroboroboana, na fampidirina ao amin'ny tranokala sosialy) izay tohanan'ny na miaraka amina marika amin'ny antoko fahatelo. Noho ireo fifandraisana ireo dia manangona na mahazo fampahalalana avy aminao ireo antoko fahatelo rehefa mandray anjara amin'ilay hetsika ianao. Tsy voafehinay ny fampiasan'ny antoko fahatelo an'ity fampahalalana ity. Manentana anao izahay hijery ny fampahafantarana momba ny tsiambaratelo an'ny antoko fahatelo toy izany mba hianatra momba ny fampiharana ny angon-drakitra alohan'ny handraisanao anjara amin'ilay hetsika.
Tanjona fampiharana ny lalàna sy lalàna. Azontsika atao ny mamoaka ny fampahalalana ho setrin'ny fizotry ny lalàna, ohatra ho valin'ny didim-pitsarana na taratasy fiantsoana, na ho valin'ny fangatahan'ny maso ivoho mpampihatra lalàna. Azontsika atao ihany koa ny mampahafantatra an'izany Fampahalalana izany amin'ny antoko fahatelo: (i) ho fiarovana ny hosoka sy ny fihenan'ny trangan-trosa, (ii) izay inoantsika fa ilaina ny manadihady, misoroka, na mandray andraikitra manoloana ny hetsika tsy ara-dalàna, (iii) hampihatra ny zonay nateraky ny fifanarahana nifanaovanareo sy izahay, ao anatin'izany ny Fepetra fampiasana, ity politika ity, ary ho an'ny faktiora sy ny fanangonana, (iv) raha mino izahay fa ilaina na mety ny fampahafantarana mba hiarovana ny zonay, ny fanananay na ny fiarovana anay na izay ny mpanjifantsika, mpampiasa, mpifanaraka na olon-kafa, (v) araka izay takian'ny lalàna.
Fifandraisana Marketing sy fizarana amin'ireo antoko fahatelo. Azonao atao ny manavao ny safidinao momba ny fahazoana fifandraisana amin'ny varotra sasany avy aminay, ary ny fizarantsika ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisanao aminay privacy@ligseruveni.com . Azonao atao ihany koa ny misafidy ny tsy handray serasera marketing amin'ny mailaka, amin'ny fanarahana ny torolàlana 'tsy hisoratra anarana' omena ao amin'ny mailaka rehetra azonao avy aminay. Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny fampandrenesanao manosika amin'ny fitaovanao finday amin'ny alàlan'ny fanamboarana fitaovana na fampiharana anao.
Safidy doka. Mety hiara-miasa amin'ny antoko fahatelo izahay hanolotra doka, ary hirotsaka amin'ny fanangonana angon-drakitra, fanaovana tatitra, famakafakana an-tranonkala, fandefasana doka ary fandrefesana ny valin'ny tranokalanay sy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ary ny fampiharana rehefa mandeha ny fotoana. Ireto antoko fahatelo ireto dia mety hampiasa cookies, fanilo Internet, piksela ary teknolojia hafa mitovy amin'izany hanatanterahana an'io asa io. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mahazo fampahalalana momba ny tranokala vangianao, ny rindranasa ampiasainao, ary ny fampahalalana hafa avy amin'ny fitetezana anao sy ny fitaovanao mba hanolorana dokam-barotra izay azo ampifanarahana amin'ny tombotsoanao amin'ny tranokalanay sy amin'ireo sehatra hafa. Ity karazana doka ity dia fantatra amin'ny hoe doka mahaliana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny dokam-barotra miorina amin'ny zanabola eo amin'ny biraonao na ny telefaona finday, ary ny fahafahanao misafidy ity karazana dokam-barotra ataon'ny antoko fahatelo ity dia tsidiho ny Initiative Advertising Network ary / na ny DAA Fandaharam-pahefana mifehy ny doka amin'ny fitondran-tena an-tserasera . Raha te hahalala bebe kokoa momba ny dokam-barotra miorina amin'ny fahalianana amin'ny fampiharana finday sy ny fomba hialana amin'ity karazana dokam-barotra ataon'ny antoko fahatelo ity dia afaka mitsidika ianao AppChoices . Azafady mba mariho fa ny safidy opt-out azonao ampiharina amin'ny alàlan'ireto programa ireto dia tsy ampiharina amin'ny dokambarotra mifototra amin'ny zana-bola ataon'ny antoko fahatelo nofidinao fa mbola mamela ny fanangonana data ho an'ny tanjona hafa, toy ny analytics, ny fikarohana ary ny asa. Azonao atao ihany koa ny manohy mandray doka, saingy mety tsy dia misy ifandraisany amin'ny zavatra mahaliana anao ny fanaovana doka.
Zon'olombelona Privacy California. Ny kaody sivily any California 1798.83 dia manome alalana ireo mpampiasa ny tranokalanay izay mponina ao California hangataka fampahalalana sasany momba ny fampahafantarinay ny mombamomba anay amin'ny antoko fahatelo ho an'ny tanjon'izy ireo mivarotra mivantana. Raha hanao fangatahana toy izany dia mifandraisa aminay privacy@ligseruveni.com .
POLITIKA COOKIE (ivelan'ny EU)
Cookies sy teknolojia hafa. Izahay sy ireo mpiara-miasa aminay, mpamatsy tolotra antoko fahatelo ary mpiara-miombon'antoka dia afaka mandefa 'cookies' amin'ny solo-sainanao na mampiasa teknolojia mitovy amin'izany hanatsarana ny traikefa an-tserasera amin'ny tranokalanay sy amin'ny alàlan'ny dokam-barotra sy haino aman-jery manerana ny Internet sy ny fampiharana finday.
Cookies dia rakitra an-tsoratra kely misy fampahalalana izay alaina ao amin'ny fitaovanao rehefa mitsidika tranokala iray ianao, anisan'izany ny tranokalanay. Averina any amin'ny fonenan'ny tranonkala ny cookies avy eo amin'ny fitsidihanao manaraka an'io sehatra io. Ny ankamaroan'ny pejin-tranonkala dia misy singa avy amin'ny sehatra web maro ka rehefa mitsidika tranokala iray ianao dia mety hahazo cookies avy amin'ny loharano maromaro. Ilaina ny cookies satria mamela tranokala hahafantatra ny fitaovan'ny mpampiasa izy ireo. Ny cookies dia mamela anao hitety tranokala mahomby, hahatadidy ny safidinao ary hanatsara ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Izy ireo koa dia azo ampiasaina hanamboarana ny dokam-barotra ho an'ny zavatra mahaliana anao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fizahanao amin'ny tranokala. Ny cookies cookies dia hofafana ho azy rehefa manidy ny browser-nao ianao ary mijanona ao amin'ny fitaovanao foana ny cookies maharitra rehefa mikatona ny browser (oh: mahatadidy ny safidin'ny mpampiasa anao rehefa miverina amin'ny tranokala ianao).
Azontsika atao koa ny mampiasa pixel na 'web beacons' izay manara-maso ny fampiasanao ny tranokalanay. Web beacons dia rakitra elektronika kely tafiditra ao amin'ilay tranokala na ny fifandraisanay (oh: mailaka) mamela antsika, ohatra, hanisa ireo mpampiasa nitsidika ireo pejy ireo na nanokatra mailaka na ho an'ny statistika hafa mifandraika amin'izany. Azontsika atao koa ny mampifangaro ny 'Software Development Kit' ('SDKs') ao anatin'ny rindranay mba hanatanterahana asa mitovy amin'ny cookies sy ny fanilo amin'ny Internet. Ohatra, ny SDK dia mety manangona fampahalalana ara-teknika sy fampiasana toy ny famantarana ny fitaovana finday sy ny fifandraisanao amin'ny tranokala sy ny fampiharana finday hafa.
Afaka mampiasa cookies sy haitao hafa izahay hahafantarana ny fitaovanao na ny fitaovanao, hitandrina ny safidinao, hanomezana endri-javatra sasany amin'ny Site, ary hanangona Fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny tranokalanay, ny atinay ary ny serasera misy anay.
Azontsika atao ihany koa ny mampiasa cookies sy teknolojia hafa (i) mba hanomezana, hampivelatra, hikolokoloana, hanokana ho an'ny olona, ​​hiarovana, ary hanatsara ny tranokalanay, ny vokatra, ny programa ary ny serivisy ary hampandeha ny orinasanay, (ii) hanao analytics, ao anatin'izany ny famakafakana sy tatitra momba ny fampiasana sy ny fahombiazan'ny tranokalanay sy ny fitaovam-barotra, (iii) hiarovana amin'ny, hamantatra, ary hisorohana ny fisolokiana sy ny hetsika tsy ara-dalàna hafa, (iv) hamoronana angona angon-drakitra momba ireo vondrona na sokajin'ireo mpampiasa anay, (v) hampifanarahana ireo mpampiasa manerana ny fitaovana, mpiara-miasa, mpiara-miasa ary mifidy antoko fahatelo, ary (vi) ho anay sy ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miasa aminay ary mifidy antoko fahatelo hitodihana, hanolotra, na hivarotra, vokatra, programa na serivisy. Ny cookie sy ny haitao hafa koa dia manamora sy mandrefy ny fahombiazan'ny doka aseho amin'ny na alefa aminay na / na aminay na / na tambajotra na tranokala hafa. Amin'ny fitsidihana ny tranokala, na amin'ny mpampiasa voasoratra anarana na amin'ny fomba hafa, dia ekenao ary ekenao fa manome anay ny fanekenao izahay hanaraka ny hetsikao sy ny fampiasanao ny tranokala amin'ny alàlan'ireo haitao voalaza etsy ambony, ary koa ireo teknolojia mitovy amin'izany novolavolaina amin'ny ho avy , ary azonay ampiasaina ny teknolojia fanarahan-dia toy izany amin'ny mailaka alefanay aminao.
Azonao atao ny manamboatra ny browser anao handavana ny cookies. Ny fifehezana cookies amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny browser dia mety tsy hametra ny fampiasantsika haitao hafa. Azafady mba jereo ny toeran'ny browser-nao raha mila fanazavana fanampiny. Na izany aza, ny fanakanana ny cookies na ny haitao mitovy amin'izany dia mety hanakana anao tsy hiditra amin'ny sasany amin'ny atiny na fiasa ao amin'ilay tranokala. Tsy mamaly ireo fambara Do Not Track izahay amin'izao fotoana izao satria mbola tsy novolavolaina ny fenitry ny haitao. Manohy mandinika ireo teknolojia vaovao izahay ary mety handray fenitra raha vao noforonina ny iray.
Mitantana Cookies sy Teknolojia hafa
Cookies tena ilaina
Ilaina ireto cookies ireto mba hahafahanao mivezivezy amin'ny tranokala sy mampiasa ny endriny. Raha tsy misy ireto cookies ireto dia tsy azo omena ireo serivisy nangatahinao (toy ny fitetezana ny pejy). Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Ampiasainay ny angona voatahiry ao amin'ity cookie ity ho an'ny fitantanana ny rafitra, hanatsarana ny filaminana, ary hanomezana fidirana amin'ireo fampiasa takiana ao amin'ilay tranokala
Fampahalalana fanampiny: Session cookie (lany daty rehefa nakatona ny browser)
Mampiasa ny cookies an-tserasera izahay mba hamakafaka ny fomba fampiasan'ny mpitsidika ny tranokala sy hanaraha-maso ny zava-bitany. Io dia ahafahantsika manome traikefa avo lenta amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny fanoloranay sy hamantarana haingana sy hamahana ireo olana rehetra mitranga. Ohatra, azontsika atao ny mampiasa cookies fampisehoana hijerena izay pejy malaza indrindra, izay fomba fampifandraisana eo anelanelan'ny pejy no mahomby indrindra, ary hamaritana ny antony mahatonga ireo pejy sasany mandray hafatra diso. Azontsika atao koa ny mampiasa ireto cookies ireto mba hanasongadinana ireo lahatsoratra na serivisin'i Site izay heverinay fa hahaliana anao miankina amin'ny fampiasanao ny tranokala. Ny fampahalalana nangonin'ireto cookies ireto dia tsy mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana avy aminay na amin'ireo mpifanaraka aminay ary ampiasaina amin'ny endrika agregato sy voafaritra ihany. Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Loharanom-pisakafoanana: Google Analytics
Ireto cookies ireto dia ampiasaina hanangonana vaovao momba ny fampiasan'ny mpitsidika ny tranokalanay. Mampiasa ny vaovao izahay hanangonana tatitra sy hanampiana anay hanatsara ny tranokalanay. Ny cookies dia manangona vaovao amin'ny endrika tsy fantatra anarana, ao anatin'izany ny isan'ireo mpitsidika ny tranokala, izay nahatongavan'ireo mpitsidika ilay tranonkala sy ireo pejy notsidihin'izy ireo.
Tsindrio eto raha ny momba ny politika momba ny tsiambaratelo Google momba ny Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Azonao atao ny miala amin'ny fanarahana ny Google Analytics amin'ny alàlan'ny fitsidihana: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Mampiasa Mouseflow izahay hisamborana ny mombamomba ny mpampiasa tsy fantatra anarana momba ny fifandraisan'ny mpitsidika tranokala amin'ireo singa ao amin'ny pejy. Ampiasainay ity angona tsy fantatra anarana ity hanateranay hevitra momba ny fanatsarana ny tranokala ho an'ireo mpampiasa.
Tsindrio eto raha hijery ny politikam-piainan'i Mouseflow: http://mouseflow.com/privacy/
Raha te hiala ianao dia azonao atao izany amin'ny https://mouseflow.com/opt-out.
Mampiasa cookies izahay mba hanomezana anao fampiasa sasany. Ohatra, ny fijerena ny atin'ny horonan-tsary, ny stream mivantana, na ny hahatsiarovanao ny safidy nataonao ary hanomezana endrika manatsara sy manokana anao manokana. Ireo cookies ireo dia tsy ampiasaina hanarahana ny fizotranao amin'ny tranokala hafa. Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Loharanom-pisakafoanana: Fikarohana Google Ajax
Ity cookie ity dia manome endri-tsarimihetsika hita amin'ny bara manerana ny tranokala. Manome sosokevitra momba ny teny lakile io ary manampy amin'ny fanadiovana ireo fangatahana fikarohana.
Cookie fivoriana (lany andro rehefa nikatona ny navigateur)
Cookies amin'ny dokam-barotra
Ny cookies amin'ny dokam-barotra (na ny cookies kendrena) dia manangona vaovao momba ny fahazarana mivezivezy mifandraika amin'ny fitaovanao ary ampiasaina hampisy fifandraisan-davitra kokoa aminao sy amin'ny zavatra tianao. Ireo cookies ireo dia mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokam-barotra ary manara-maso raha naseho tsara ny doka. Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
DoubleClick dia mampiasa cookies hanatsarana ny doka. Ny rindranasa iraisana sasany dia ny mikendry dokam-barotra mifototra amin'izay mifandraika amin'ny mpampiasa, hanatsarana ny fanaovana tatitra momba ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra, ary mba tsy hampisehoana doka efa hitan'ny mpampiasa.
Tsindrio eto raha ny momba ny politika momba ny tsiambaratelo Google momba ny DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Azonao atao ny miala amin'ny fanarahana ny DoubleClick amin'ny alàlan'ny fitsidihana https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Loharano Cookie: Facebook Pixel
Ampiasainay ny pixel Facebook ho fomba iray hahatakarana bebe kokoa ireo mpampiasa anay, hamboarina ny atiny sy ny doka, hanomezana endrika haino aman-jery sosialy ary hamakafaka ny fivezivezena ao amin'ilay tranonkala. Mijanona tsy mitonona anarana ireo angona nangonina. Midika izany fa tsy afaka mahita ny angona manokana an'ny mpampiasa tsirairay izahay. Na izany aza, ny angona nangonina dia voatahiry sy karakarain'ny Facebook.
Facebook dia afaka mampifandray ny angona amin'ny kaonty Facebook-nao ary mampiasa ny angon-drakitra ho an'ny tanjon'izy ireo dokam-barotra, mifanaraka amin'ny politikany manokana izay hita eo ambanin'ny: https://www.facebook.com/about/privacy/
Raha te hiala ianao dia azonao atao izany amin'ny https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Ny dokam-barotra Cookies dia azo ampiasaina amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy izay mifandraika amin'ny tranokalanay, toy ny bokotra 'Share' na mpilalao audio / video voapetraka. Ireto cookies ireto dia manome ny fampiasa ilaina. Ireo tranonkala media sosialy toy izany dia mametraka ny cookies amin'ny dokam-barotra rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao ary rehefa mampiasa ny serivisin'izy ireo ary mivezivezy lavitra ny tranokalanay. Ny fanao cookie amin'ny sasany amin'ireo tranokala media sosialy dia voalaza etsy ambany:
Politikan'ny cookie an'ny Facebook
Politikan'ny cookie an'ny Twitter
Politikan'ny cookie an'ny Instagram
Politikan'ny cookie an'ny Pinterest
Politikan'ny Cookie an'ny YouTube
Politika Cookie an'ny Google Plus
MANAIKY, MANARITRA ary manafoana ny fampahalalana nataonao
Raha te hanontany momba ny mombamomba anao izay nangoninay momba anao an-tserasera avy amin'ny tranokala izay navoakan'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity na hanitsiana ny mombamomba anao manokana, dia azonao atao ny mandefa mailaka aminay privacy@ligseruveni.com . Azonao atao ny mangataka sy mahazo ny fanesorana ireo anjara ampiasain'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny mailaka privacy@ligseruveni.com miaraka amin'ny fangatahanao ary mamaritra manokana ny Contribution momba ny mpampiasa tadiavinao esorina. Mety tsy ekentsika ny fangatahana hanova na hamafa vaovao raha mino izahay fa mandika lalàna na fepetra ara-dalàna izany hetsika izany na mahatonga ny vaovao tsy marina. Ny fanesorana ireo fandraisan'anjaran'ny mpampiasa anao amin'ny tranokala dia tsy manome antoka fa fanesorana tanteraka na feno ny fandraisan'anjaran'ireo mpampiasa avy ao amin'ny tranokala satria ny kopia dia mety ho hita eo amin'ny pejy voatahiry cache na voatahiry na nopetahan'ny mpampiasa hafa. Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny mailaka na mailaka fampiroboroboana isan-karazany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fikitihana ireo rohy 'tsy hisoratra anarana' omena amin'ny fifandraisana toy izany. Mety tsy hiala amin'ny serasera mifandraika amin'ny tranokala ianao, toy ny fanamarinana kaonty, ny fanamafisana ny fividianana ary ny hafatra momba ny fitantanana raha mbola misoratra anarana amin'ilay tranokala ianao.
FAMPANDROSOANA NY MOMBA ANAO
Ny tranokala dia fampiantranoana any Etazonia. Azontsika atao ny mametra ny fisian'ny tranokala na serivisy na vokatra voalaza ao amin'ilay tranokala amin'ny olona na faritra jeografika amin'ny fotoana rehetra. Raha misafidy ny hiditra ny tranokala ianao avy any ivelan'ny Etazonia, dia mety hanao izany ianao raha mety.
Nampihatra fepetra ara-teknika sy fandaminana mifanaraka amin'ny fiarovana ny tranokala izahay. Mampalahelo fa tsy azo antoka tanteraka ny fampitana vaovao amin'ny alàlan'ny Internet sy ireo sehatra finday. Na dia miaro aza izahay mba hiarovana ny mombamomba anao, tsy afaka miantoka ny fiarovana ny mombamomba anao izahay. Mety hampidi-doza anao ny fampitana ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny Internet. Tsy tompon'andraikitra amin'ny familiana ny toe-javatra miafina na fepetra fiarovana izahay. Miankina aminao koa ny fiarovana sy fiarovana ny mombamomba anao. Izay nomenay anao (na ny toerana nisafidiananao) tenimiafina hidirana amin'ny faritra sasany amin'ny tranokalanay, dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana tsiambaratelo an'ity tenimiafinao ity ianao. Tsy tokony hizara olon-kafa ny teny miafinao ianao.
FANovana amin'ny politikantsika
Azontsika atao ny manavao ny Politikanay indraindray. Hampahafantatra anao izahay momba ny fiovana ara-materialy momba izany Politikan'ny tsiambaratelo izany amin'ny alàlan'ny fametrahana fampandrenesana amin'ny tranokalanay. Mamporisika anao izahay hijerena tsindraindray ary hijery ity Politika ity mba hahafantaranareo ny fanovana tato ho ato.
AHOANA NO HITOKAFANA ANTSIKA
Ahiahy momba ny fiainana manokana. Raha manana ahiahy na fitarainana momba ny fiainana manokana eto amin'ity tranokala ity ianao, azafady mifandraisa aminay Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood , CA, 90069, USA na mandefa mailaka aminay any privacy@ligseruveni.com . Hanao izay tsara indrindra vitany izahay hamaly anao ara-potoana sy matihanina mba hamaliana ireo fanontanianao sy hamahana ny olanao. © Hundeshagen Digital Media, LLC. Zo rehetra voatokana. Purpleclover sy Purpleclover.com dia mari-pamantarana ny Hundeshagen Digital Media, LLC
FAMPANDROSOANA NY FIVORIANA HO AN'NY OLON'NY KALIFORNIA
Nohavaozina farany: 1 Janoary 2020
Ity FANAMARIHANA PRIVACY HO AN'NY RESIDENTA CALIFORNIA dia mameno ny vaovao voarakitra ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ary mihatra amin'ny mpitsidika, mpampiasa ary olon-kafa monina ao amin'ny State of California ('mpanjifa' na 'ianao'), ary manome vaovao momba ny zon'ny mpanjifa eo ambanin'ny Ny lalàna momba ny tsiambaratelo ho an'ny mpanjifa any California an'ny taona 2018 ('CCPA') ary ny lalàna momba ny fiainana manokana any California hafa. Ny teny voafaritra ao amin'ny CCPA dia misy dikany mitovy rehefa ampiasaina ao amin'ity fampandrenesana ity.
Fampahalalana ho an'ny tena manokana no angoninay
Manangona vaovao izay mamantatra, mifandraika, mamaritra, miresaka izahay, afaka mifandray, na azo ampifandraisina amin'ny fomba mivantana na ankolaka amin'ny mpanjifa na fitaovana ('mombamomba ny tena'). Manokana izahay dia nanangona ireto sokajy fampahalalana manokana momba ny mpanjifa ireto tao anatin'ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa:
Internet na hetsika tambajotra hafa mitovy amin'izany (toy ny tantara fitetezana)
Data momba ny geolocation (toy ny toerana marina misy ny fitaovanao)
Ny fampahalalana manokana dia tsy misy:
Fampahalalana azo ampahibemaso avy amin'ny firaketan'ny governemanta.
Fampahalalana momba ny mpanjifa voafaritra na voaangona.
Ny fampahalalana voaroaka tsy ho ao anatin'ny sahan'ny CCPA, toy ny:
fampahalalana momba ny fahasalamana na ara-pahasalamana rakotry ny lalàna momba ny fiantohana ara-pahasalamana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny taona 1996 (HIPAA) sy ny lalàna momba ny tsiambaratelo momba ny lalàna momba ny fitsaboana (CMIA) na ny data momba ny fizaham-pitsaboana;
ny mombamomba anao manokana voarakitry ny lalàna manokana momba ny fiainana manokana, anisan'izany ny Fair Credit Reporting Act (FRCA), ny Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) na ny California Financial Information Privacy Act (FIPA), ary ny Driver's Privacy Protection Act of 1994.
Azonay atao ny manangona eo ho eo ny fampahalalana ara-teknika sy fampiasana sasany rehefa mampiasa ny tranokalanay ianao na mifanerasera amin'ny doka an-tserasera sy ny atiny, toy ny karazana fitaovana, mpitety ary ny rafitra fampiasanao ampiasanao, fampahafantarana fitaovana tsy manam-paharoa, adiresy IP, fikirakirana fitaovana ary fitetezana. , ireo pejin-tranonkala tsidihinao, fampahalalana momba ny fifandraisanao amin'ny tranokalanay sy ireo an'ny mpiara-miasa aminay fahatelo (toy ny pejy inona no tsidihinao), ary ny fampahalalana ahafahantsika mamantatra sy mampifandray ny asanao manerana ireo fitaovana sy tranokala. Azontsika atao ny mahafantatra ny fitaovanao hanome anao traikefa manokana sy dokam-barotra manerana ireo fitaovana ampiasainao.
Azafady mba mariho fa misy orinasa sasany mametraka teknolojia fanarahan-dia toy ny cookies ao amin'ny tranokalanay izay mamela ireo orinasa ireo hahazo vaovao momba ny asanao ao amin'ny tranokalanay izay mifandraika amin'ny fitaovanao na fitaovana. Jereo ny Politikan'ny cookie (ivelan'ny EU) etsy ambony raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fanarahan-dia amin'ny tranokalanay sy ny fomba fampiasantsika ireo teknolojia ireo mba hanangonana izany vaovao izany. Ireo orinasa ireo dia mety hampiasa izany data izany hanamboarana atiny ho anao ary hanompoanao dokam-barotra mifandraika kokoa amin'ny tranokalanay na amin'ny hafa, amin'ny anarantsika sy amin'ny anaran'ny mpanao dokam-barotra hafa. Raha mangataka opt opt ​​ianao ary te-hiala amin'ny fanarahana ny cookie ho an'ny tanjona dokam-barotra, dia tadidio fa mila manitsy misimisy ireo toerana fitetezanao ianao ary mametraka ny safidinao araka ny voalaza ao aminay Politikan'ny cookie (ivelan'ny EU) etsy ambony.
Azonao atao ny miditra amin'ny lohatenin'ilay tranokala amin'ny alàlan'ny vondrom-piarahamonina, dinika ary tranokala media sosialy, serivisy, plug-in ary fampiharana noforonin'ireo mpamatsy haino aman-jery sosialy ('Social Media Site'). Ny fametrahana ny fiainanao manokana amin'ny tranokala media sosialy toy izany, ary koa ny politikany manokana, dia hamaritra ny mombamomba anao sy ny zavatra hafa azo zaraina aminay, na raisinay, amin'ny alàlan'ny haitao fanaraha-maso ny haino aman-jery sosialy rehefa miditra amin'ilay tranokala ianao, ary mety nangonina sy nampiasain'ireto tranonkala media sosialy ireto. Raha avelan'ny lalàna, amin'ny alàlan'ny fanomezana an'ity fampahalalana ity na raha tsy izany, mifandraika amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny tranokala media sosialy, dia manaiky ny fampiasainay ny fampahalalana avy amin'ny tranokalan'ny haino aman-jery sosialy mifanaraka amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity.
Fampahalalana momba ny toerana. Manangona vaovao momba ny toerana ankapobeny misy anao izahay, toy ny firenenao na ny adiresy IP anao. Manangona ny toerana marina misy ny fitaovanao izahay rehefa miditra amin'ny tranokala amin'ny alàlan'ny findainao. Tsy voatazona daholo ireo fampahalalana rehetra ireo, ary tsy ireo fampahalalana rehetra ireo no azo ampifandraisina aminao.
NY FOMBA FOMBA FANAMPIANA FAMPahalalana ho an'ny tena manokana
Mampiasa fampahalalana manokana izahay ho an'ny tanjona voalaza ao amin'ity politika ity na naseho tamin'ny fotoana nanangonana na tamin'ny alalanao, anisan'izany ireto manaraka ireto:
Manolora, mivarotra, ary manao dokam-barotra momba ny vokatra, programa ary serivisy avy aminay sy ireo mpiara-miasa aminay ary ireo mpiara-miombon'antoka mety hahaliana anao. Azontsika atao koa ny mampiasa ny fampahalalana angoninay hanehoana doka amin'ny mpihaino kendren'ny mpanao dokam-barotra.
Hamarino ny momba anao manoloana ireo fangatahana CCPA etsy ambany.
LOHA HEVITRA AVY AMINAY IZAO NO MANAMPOAN'NY FAHAMARINAN'NY OLOMBELONA
Manangona fampahalalana manokana ho azy avy amin'ny fitaovanao izahay. Mampiasa fitaovana fanarahana izahay mba hanangonana vaovao rehefa mampiasa na mifanerasera amin'ny tranokala, ny doka sy ny atiny an-tserasera ary ny mail anay.
Azontsika atao ny manangona ny mombamomba anay amin'ny tahiry azo ampahibemaso.
Mahazo mombamomba anay manokana amin'ireo mpamatsy karakarainay izahay hiasa amin'ny anay. Ohatra, ireo mpivarotra mampiantrano na mitazona ireo tranonkalantsika sy mandefa mailaka fampiroboroboana ho anay dia mety hanome fanazavana anay.
Mety hahazo fampahalalana manokana avy amin'ny antoko hafa isika, toy ny rehefa mizara vaovao amintsika ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny marketing na tambajotran-doka. Mety hahazo fampahalalana avy amin'ny tranokala media sosialy koa izahay, araka ny voalaza etsy ambony.
NY FOMBA Hizaranay sy hamoahana ny mombamomba anao manokana
Azontsika atao ny manambara ny mombamomba anao amin'ny antoko hafa ho an'ny tanjonay. Tao anatin'ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa teo, dia nambaranay ity sokajy fampahalalana manokana anay ity ho an'ny tanjonay manokana:
Azontsika atao ny manambara ny sokajy momba ny mombamomba anay manokana ho an'ny tanjon'ny orinasanay amin'ireto sokajy manaraka ireto:
Ireo mpiara-miasa amintsika.
Antoko fahatelo izay anomezanao alalana anao na ny agents anao hampahafantatra ny mombamomba anao manokana mifandraika amin'ny vokatra na serivisy omenay anao.
Nandritra ny roa ambin'ny folo (12) volana lasa izay, dia tsy nivarotra fampahalalana manokana izahay raha ny fahafantaranay ny CCPA. Ny orinasa dia tsy hivarotra ny mombamomba anao amin'ny ho avy, araka ny fahalalanay ny CCPA, raha tsy manome fampandrenesana anao sy manome anao fotoana hialana amin'izany fotoana izany.
Ny zonao sy ny safidinao
Ny CCPA dia manome ho an'ny mpanjifa (mponin'i California) zon'olombelona manokana momba ny mombamomba azy ireo. Ity fizarana ity dia mamaritra ny zon'ny CCPA anao ary manazava ny fomba fampiharana ireo zony ireo.
Fahazoana mombamomba ny zon'ny fampahalalana manokana sy ny zon'ny data
Manan-jo hangataka aminao izahay hampahafantatra anao ny mombamomba anao momba ny fanangonana sy ny fampiasana ny mombamomba anao manokana tato anatin'ny 12 volana. Vantany vao voarainay sy voamarinay ny fangatahan'ny mpanjifanao, dia hampahafantatra anao ny sasany amin'ireto manaraka ireto arakaraka ny fangatahanao:
Ny mombamomba ny mombamomba anao manokana izay nangoninay momba anao (antsoina koa hoe fangatahana fitaterana angona).
Ny sokajy ny mombamomba anao nangoninay momba anao.
Ireo sokajy loharano ho an'ny mombamomba anao nangoninay momba anao.
Ny tanjonay ara-barotra na ara-barotra amin'ny fanangonana na fivarotana izany mombamomba anay manokana.
Ireo sokajy antoko hafa izay izaranay izany mombamomba izany manokana.
Raha nivarotra na nanambara ny mombamomba anao ho an'ny tanjona ara-barotra izahay, lisitra roa samy hafa manambara:
varotra, mamantatra ireo sokajy fampahalalana manokana izay novidian'ny sokajy tsirairay avy; SY
fampahafantarana ho an'ny tanjona ara-barotra, mamantatra ireo sokajy fampahalalana manokana izay azon'ny sokajy tsirairay avy.
Zon'ny fangatahana famafana
Manan-jo hangataka ianao hamafa ny mombamomba anao manokana izay nangoninay taminao ary notazoninay, na izany aza misy faningana. Raha vantany vao voarainay sy voamarinay ny fangatahan'ny mpanjifanao, hofafanay (ary atorinay ny mpamatsy tolotra anay hamafa) ny mombamomba anao manokana avy amin'ny firaketana anay, raha tsy hoe misy fepetra tsy mihatra.
Fampiharana ny fahazoana miditra, ny zakan'ny angon-drakitra ary ny zon'ny famafana
Raha te hampiasa ny fidirana, ny zakan'ny angon-drakitra ary ny zon'ny famafana voalaza etsy ambony, dia andefaso ny fangatahan'ny mpanjifa aminay:
Miantso anay amin'ny: 1-866-522-5025
Mandefa mailaka anay amin'ny: privacy@ligseruveni.com
Ianao irery na olona avelanao hiasa amin'ny anaranao no afaka mangataka fangatahana mpanjifa mifandraika amin'ny mombamomba anao.
Azonao atao ny mangataka fangatahana fidirana na fidirana data data indroa ao anatin'ny fe-potoana 12 volana. Ny fangatahan'ny mpanjifa dia tsy maintsy:
Manomeza adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, adiresy na fampahalalana ampy hafa ahafahantsika manamarina fa ianao no olona nanangonanay mombamomba anao na solontena nahazo alàlana.
Farito ny fangatahanao amin'ny antsipiriany ampy ahafahantsika mahatakatra tsara, manombatombana ary mamaly izany.
Izahay dia tsy afaka mamaly ny fangatahanao na manome anao mombamomba anao raha tsy afaka manamarina ny mombamomba anao na ny fahefan'ny solontenanao izahay hanao izany ary hanamafy ny mombamomba anao manokana mifandraika aminao. Ny fangatahana mpanjifa dia tsy mitaky famoronana kaonty miaraka aminay. Ny mombamomba anay manokana izay omena amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ihany no ampiasainay hanamarinana ny mombamomba ny mpangataka na ny fahefana anaovany izany.
Famerenana ny fotoana sy ny endrika famaliana
Miezaka izahay hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa voamarina ao anatin'ny 45 andro aorian'ny nahazoana azy. Raha mila fotoana bebe kokoa izahay (hatramin'ny 90 andro), dia hampahafantarinay anao ny antony sy ny fotoana fanitarana an-tsoratra. Raha manana kaonty miaraka aminay ianao dia hanome ny valiny an-tsoratra an'io kaonty io izahay. Raha tsy manana kaonty miaraka aminay ianao dia handefa ny valinteninay an-tsoratra amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny elektronika araka ny safidinao. Izay fampahafantarana omena anay dia tsy handrakotra afa-tsy ny 12 volana mialoha ny fahazoana ny fangatahana. Ny valiny omenay dia hanazava ihany koa ny antony tsy ahafahantsika manaraka ny fangatahana iray, raha ilaina izany. Ho an'ny fangatahana fitaterana angona angon-drakitra, hisafidy endrika iray izahay hanomezana ny mombamomba anao izay mora ampiasaina ary tokony hamela anao hampita ny vaovao avy amina orinasa iray mankany amin'ny orinasa hafa tsy misy sakana.
Fanovana ny fanamarihana momba ny fiainantsika manokana
Izahay dia manan-jo hanitsy an'io fampandrenesana momba ny tsiambaratelo io araka ny fahendrentsika sy amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manova ity fampandrenesana momba ny tsiambaratelo ity izahay dia hampandre anao amin'ny alàlan'ny fampandrenesana ao amin'ny pejin-tranonkalanay.
Raha manana ahiahy na fitarainana momba ny fiainana manokana eto amin'ny tranokala ianao, ny fomba fanangonana sy fampiasanao ny mombamomba anao, ny safidinao sy ny zonao momba izany fampiasana izany, na maniry hampihatra ny zonao amin'ny lalàna California, azafady, aza misalasala mifandray aminay ao amin'ny Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Legal, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9th Floor, East Hollywood, CA, 90069, Etazonia, mandefa mailaka anay aminay privacy@ligseruveni.com na miantso amin'ny 1-866-522-5025.
Politika ho an'ny mpampiasa EU
Hundeshagen Digital Media, LLC d / b / a Hundeshagen Industries, ireo mpiara-miasa aminy sy ireo mpiara-miasa aminy ('Hundeshagen', 'we', 'us', na 'our') dia manome lanja ny tsiambaratelon'ireo mpampiasa sy mpamandrika. Miezaka izahay mba hahay mangarahara momba ny fanangonana sy ny fampiasanao ny mombamomba anao (araka ny voafaritra etsy ambany), hitahirizana ny fampahalalana ho anao ary hanome anao safidy manan-danja. Ity Politika momba ny tsiambaratelo ('Politika') ity dia mamaritra ny fomba fiainana manokana momba ny www.ligseruveni.com tranokala (ny 'Site'), izay tompony ary ampiasain'ny Hundeshagen iray manontolo na amin'ny ampahany. Ity politika ity dia manazava ny fomba fanangonana, fampiasana ary famoahana ny mombamomba anao Hundeshagen ho mpanara-maso angona.
Ity politika ity dia mihatra amin'ny fomba fanaovanay fampahalalana an-tserasera momba ny tranokala momba ireo mpampiasa ao amin'ny Vondrona eropeana. Ity politika ity dia tsy mihatra amin'ny angona manokana nangonina tamin'ny alàlan'ny tranokala na fampiharana fahatelo, anisan'izany ireo tranonkala azonao alefa amin'ny alàlan'ny tranokala. Ireo tranonkala sy rindranasa ireo dia mety manana ny politikany manokana, izay amporisihinay anao hamaky alohan'ny hanomezana mombamomba anao manokana na amin'ny alalàn'izy ireo.
Azafady mba vakio tsara ity Politika ity hahafantaranao ny politikanay sy ny fomba fanaonay mikasika ny mombamomba anao sy ny fomba hitondranay azy. Raha tsy mifanaraka amin'ny politikanay sy ny fomba fanaonay izahay dia aza mampiasa ilay tranokala. Manaiky an'ity politika ity ianao amin'ny fampiasana ny tranokala. Ity politika ity dia mety hiova indraindray. Ny fitohizanao ny fampiasana ny tranokala aorian'ny fanovana nataonay dia heverina ho fanekena ireo fanovana ireo, koa mba zahao azafady ny Politika isaky ny misy fanavaozana.
Ny tranokalanay dia fampiantranoana any Etazonia. Midika izany fa ny fampahalalana angoninay dia hodinihinay any Etazonia, firenena manana fenitra ambany amin'ny fiarovana ny angona manokana noho ny Vondrona Eropeana. Na izany aza, rehefa manolotra ny tranokalanay sy ny serivisinay ho an'ny mponina ao amin'ny Vondrona eropeana isika, dia iharan'ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra Eoropeanina koa i Hundeshagen, indrindra ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra ankapobeny (ny GDPR).
Hundeshagen dia eo am-panaovana ny fanendrena solontena iray ao amin'ny EU ary hampandre anao amin'ny alàlan'ny kinova fanavaozana an'ity Politika ity raha vantany vao voatendry ny solontenan'ny EU.
Mampiasa fitaovana mitovy amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny fifanarahana mifanaraka amin'ny GDPR izahay rehefa mifindra<
Ny mombamomba anao ivelan'ny Vondrona eropeana na amin'ny antoko fahatelo, azonay atao koa ny mametra ny fisian'ny tranokala na serivisy na vokatra voalaza ao amin'ilay tranokala amin'ny olona na amin'ny faritra jeografika amin'ny fotoana rehetra.
ZANAK'OLO 16 taona
Ny tranokala dia tsy natao ho an'ny zaza latsaky ny 16 taona, ary tsy manangona fahalalana mombamomba ny ankizy latsaky ny 16 taona isika. Raha fantatsika fa nanangona na nahazo fampahalalana manokana avy amin'ny zaza latsaky ny 16 taona izahay nefa tsy voamarina ny faneken'ny ray aman-dreny, dia hofafanay izany vaovao izany. Raha mino ianao fa mety manana fampahalalana avy aminay na momba ny zaza latsaky ny 16 taona izahay, dia mifandraisa aminay privacy@ligseruveni.com
Azontsika atao ny manangona sy manambatra karazana fampahalalana samihafa, ary miara-manondro an'io fampahalalana rehetra io ao anatin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ho 'Fampahalalana'. Ireto ambany ireto ny karazana fampahalalana azontsika angonina:
Fampahalalana omenao anay. Azontsika atao ny manangona vaovao omenao anay, toy ny:
rehefa misoratra anarana amin'ny na mampiasa ilay tranokala ianao, na misoratra anarana amin'ny serivisy rehetra ao amin'ilay tranokala, dia mety hangataka aminao izahay hanome fanazavana manokana hahafahanao mamantatra anao, toy ny anarana, adiresy paositra, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, na antsipirian'ny fifandraisana hafa.
azonay atao ny mangataka aminao hanome ny fampahalalana anao rehefa miditra amin'ny fifaninanana na tohatra tohananay ianao na mamaly ny fanadihadiana izay azonao alefa ary mangataka ny hamenoana ny tranokala.
rehefa mifandray aminay ianao mba hitatitra olana amin'ny tranokala, na hanao fanontanina ankapobeny hafa. Azontsika atao ny mitahiry ny firaketana sy ny kopian'ny taratasinao (ao anatin'izany ny adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, ary ny mombamomba anao manokana izay nomenao).
Azonao atao ny miditra amin'ny lohatenin'ilay tranokala amin'ny alalàn'ny vondrom-piarahamonina fahatelo, forum, ary tranonkala media sosialy, serivisy, plug-in ary fampiharana ('tranokala media sosialy'). Ny fametrahana ny fiainanao manokana amin'ny tranokala media sosialy toy izany, ary koa ny politikany manokana momba ny fiainana manokana, dia hamaritra ny mombamomba anao sy ny vaovao hafa izay mety hangonina sy hampiasain'ireto tranonkala media sosialy ireto.
Fampahalalana momba ny toerana.
Manana fidirana amin'ny fampahalalana momba ny toerana misy anao izahay, toy ny firenenao, rehefa manome izany ianao na amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fitaovana (toy ny adiresy IP), na ny toerana misy ny fitaovanao rehefa miditra amin'ny tranokala miaraka amin'ny fitaovanao finday ianao. Raha ilaina dia tsy hanangona izany fampahalalana izany izahay raha tsy efa nomenao alàlana.
Inona no fototra ara-dalàna ananantsika amin'ny fikarakarana ny angon-drakitrao manokana?
Izahay ihany no manodina ny angon-drakitrao manokana. Ny fampiasana ny angon-drakitrao manokana dia hohamarinina ihany koa amin'ny alàlan'ny 'fanodinana' ara-dalàna iray izay omena ao amin'ny Fitsipika momba ny fiarovana ankapobeny momba ny data (ny GDPR).
Ny tabilao etsy ambany dia misy fanazavana momba ny haben'ny faritra fanodinana ara-dalàna isan-karazany misy eo ambanin'ny GDPR izay iankinan'i Hundeshagen rehefa manangona Fampahalalana:
Fampisehoana fifanarahana: izay ilainay ny angon-drakitrao manokana ahafahana manao fifanarahana aminao sy manome ny serivisinay ho anao.
Tombontsoa ara-dalàna: izay ampiasainay ny angon-drakitrao manokana hahatratrarana zanabola ara-dalàna sy ny antony fampiasantsika azy mihoatra ny fitsarana an-tendrony ny zonao fiarovana data.
Anatolia mpiandry ondry Pyrénées lehibe miampita
Fanambarana ara-dalàna: izay ilanao ny angon-drakitrao manokana mba hahafahanay miaro, manenjika na manao fitoriana aminao, izahay na antoko fahatelo.
Ny adidy sy zonay ara-dalàna: izay takiana aminay mba hikirakira ny angon-drakitrao manokana ao anatin'ny adidy ara-dalàna ao amin'ny EU.
Fanekena: izay nifanekenao tamin'ny fampiasanao ny angon-drakitrao manokana (amin'izay no hanolorana anao taratasy fangatahana mifandraika amin'ny fampiasana toy izany ary azonao atao ny manaisotra ny fanekenao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanomezana fampandrenesana an'i privacy@ligseruveni.com
Manome ny vokatra sy serivisinay:
Mampiasa ny fampahalalana angoninay momba anao izahay mba hanatanterahana ny fangatahanao ny vokatra, ny fampiharana, ny serivisy ary ny atiny ary hanome, mampivelatra, mitazona, manamboatra manokana, miaro ary manatsara ny traikefanao sy ny fanoloranay. Ohatra, mampiasa fampahalalana nangonina tamin'ny tranokalanay izahay (i) manome atiny, vokatra, serivisy ary fanavaozana (ii) manome fampandrenesana momba ny kaontinao na famandrihana, (iii) ahafahanao mamaky sy mandefa hevitra, na (iv) mamela ianao hiditra amin'ny fampiroboroboana, ny fifaninanana ary ny sweepstakes.
Fomba fanodinana eo ambanin'ny GDPR:
Fanatanterahana ny adidy ifanarahana sy ara-dalàna; ary miaraka amin'ny fanekenao (raha ilaina)
Liana ara-dalàna (raha mety)
Fanatsarana sy fampivoarana ireo vokatra sy serivisy vaovao; fitomboan'ny fahombiazana; miaro amin'ny hosoka; mitazona ny antsipirihanao momba ny vokatra sy / na serivisy izay mety nividiananao na nahaliana anao taloha, mba hanoroana anao vokatra hafa mety mahaliana.
Mampiasa ny fampahalalana angoninay izahay (i) handefasana vaovao momba ny fampiroboroboana, ny fanolorana ary ny fiasa asainay, (ii) manome doka mifototra amin'ny zavatra mahaliana anao sy ny toerana misy anao, (iii) mifandraika amin'ireo fiasa mifandraika amin'ny fiaraha-miasa, hetsika ary tranokala media sosialy omena miaraka aminao, na mamela ny tranokalan'ny tambajotra sosialy hanome anao doka mifototra amin'ny zavatra mahaliana anao, (iv) indraindray dia ampiasainay koa ity fampahalalana ity mba hanolorana, hivarotana, na hanaovana doka, vokatra na serivisy ho anao avy aminay sy ireo mpiara-miasa aminay, orinasa mpiara-miombon'antoka, ary antoko fahatelo voafantina, na (v) ho anay sy ireo mpiara-miasa aminay, mpiara-miasa aminay ary misafidy antoko fahatelo hitodihana, hanolotra, na hanao dokambarotra momba ny vokatra, programa na serivisy mety hahaliana anao.
Tombontsoa ara-dalàna ary miaraka amin'ny alalanao (raha ilaina)
Fampiroboroboana ny vokatray sy ny serivisinay ho an'ireo mpampiasa anay, manome tolotra manokana sy fotoana ary serivisy mifanaraka aminao izay mety hahaliana anao.
Mampiasa Fampahalalana momba anao izahay hiresahana aminao, toy ny (i) hampandrenesana anao rehefa mandresy ny iray amin'ny fifaninanana na ny dian-tongotrano na rehefa manova ny politikanay na ny fepetra izahay, (ii) hamaly ny fanontanianao, na (iii ) hifandray aminao momba ny kaontinao.
Fanomezana sy / na fampitana fampahalalana manan-danja; fitomboan'ny fahombiazana; fitantanana, fanatsarana, na fampivelarana serivisy sy vokatra vaovao; antontan'isa mitambatra.
Ho an'ny tanjona fiarovana ary hamakafaka sy hanatsara hatrany ny tranokalanay sy ny serivisinay.
Mampiasa ny mombamomba ny teknika sy ny fampiasana izahay hanatsarana ny volavolanay, ny fampiasa ary ny atiny ary ahafahanay mampifanaraka ny zavatra niainanao amin'ny atiny sy atinay. Ampiasainay ity Fampahalalana ity (i) hanomezana, hampivelatra, hikolokoloana, hanaingoana manokana, hiarovana, ary hanatsara ny vokatra, ny fampiharana ary ny serivisinay, ary ny hampandeha ny asanay, (ii) hanao analytics, ao anatin'izany ny famakafakana sy ny tatitra momba ny fampiasana sy ny fahombiazana , (iii) miaro amin'ny, mamantatra, ary misoroka ny fisolokiana sy ny hetsika tsy ara-dalàna hafa, (iv) hamoronana angona angon-drakitra momba ny vondrona na sokajy mpampiasa anay, ary (iv) hisorohana ny hosoka.
Fanatanterahana ny adidy ifanarahana sy ara-dalàna, ny tombontsoa ara-dalàna ary amin'ny alalanao (raha ilaina izany)
Fanombatombanana ny fampahalalana avy amin'ny fitsidihanao sy ny fifandraisanao amin'ireo tranokala mba hananana fahatakarana tsara kokoa momba ny fampiasana azy ireo hahafahanay mivelatra traikefa amin'ny mpampiasa kokoa.
Marketing amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy an'ny antoko fahatelo.
Mampiasa ny mombamomba anao izahay rehefa mifandray amina tambajotra sosialy an'ny antoko fahatelo hanompoana anao amin'ny doka ary hifandray aminao amin'ny tambajotra sosialy an'ny antoko fahatelo. Azonao atao ny mianatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ireto endri-javatra ireto, ny angona momba ny mombamomba izay azonay momba anao, ary hahitanao ny fomba hialana amin'ny alàlan'ny fandinihana ireo fampahafantarana momba ny tambajotra sosialy an'ny antoko fahatelo mifandraika amin'izany.
Tombontsoa ara-dalàna, ary amin'ny alalanao araka ny azonay na tambajotra sosialy an'ny antoko fahatelo (raha ilaina izany)
Ny fanombatombanana ny fampahalalana avy amin'ny fitsidihanao sy ny fifandraisanao amin'ireo tranokala mba hahalalana bebe kokoa ny fampiasan'izy ireo mba hahafahanay mivelatra traikefa amin'ny mpampiasa maivana kokoa, manome tolotra voatondro, fotoana ary serivisy mety hahaliana anao.
Fanarahana sy hanovana ny firafitry ny orinasa.
Mampiasa fampahalalana angoninay izahay mba hahitana, hanadihady ary hisorohana ireo hetsika manitsakitsaka ny fampiasa ampiasainay, mety hosoka, manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, na lalàna hafa, hanaraka ny fepetra takian'ny lalàna, ary hiarovana ny zonay sy ny zonay ary ny fiarovana ireo mpampiasa anay. sy ny hafa. Azonay atao ihany koa ny manome ny angon-drakitrao manokana amin'izay mety ho mpanafika na mpampiasa vola amin'ny faritra rehetra amin'ny orinasa Hundeshagen ho an'ny tanjon'io fahazoana vola na fampanjariam-bola io.
Fanatanterahana adidy fifanarahana sy ara-dalàna
Fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa, fananantsika ary zontsika hafa, fiarovana ny tsiambaratelo, fiarovana ary zon'ny besinimaro.
Hundeshagen dia mifehy ny fampahalalana anao ary raisina ho mpanara-maso angon-drakitra araka ny voafaritra ao amin'ny GDPR. Azontsika atao ny mizara sy mamoaka ny fampahalalana nangonina sy voafaritra momba ireo mpampiasa anay nefa tsy misy fetra.
Aiza no anaovanay ireo mpikirakira angona izay manodina angona manokana ivelan'ny EEA dia hataonay antoka fa hisy ny ambaratonga fiarovana mifanaraka amin'izany. Ho fanampin'izany, hampiharo fiarovana ara-dalàna mifehy ny famindram-pahefana toy izany izahay, toy ny fitaovana mitovy amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny fifanarahana, ny faneken'ny olona, ​​na ny antony ara-dalàna avelan'ny fangatahana ara-dalàna azo ampiharina.
Ny firenena sasany ivelan'ny EEA dia nankatoavin'ny Vaomiera eropeana ho toy ny fiarovana mitovy amin'ny lalàna fiarovana ny angona EEA. Ny lalàna fiarovana ny angon-drakitra Eoropeana dia mamela an'i Hundeshagen hamindra an-kalalahana ny angon-drakitra manokana amin'ireo firenena toy izany. Azafady mba mifandraisa aminay privacy@ligseruveni.com raha te hahita kopian'ny fiarovana ianao ampiharinay mifandraika amin'ny fanondranana ny mombamomba anao manokana.
Mpanome tolotra . Noraisinay ireto sokajy manaraka ireto izay mandrindra ny angon-drakitra manokana ho anay: ny mpifanaraka aminay, ny mpamatsy tolotra, ny mpamatsy atiny ary ny antoko fahatelo ampiasainay hanohanana ny orinasanay dia mety hahazo ny mombamomba azy ireo hanampy amin'ny fanatanterahana ny serivisy ataon'izy ireo. ho antsika, ao anatin'izany ny: famoronana, fikojakojana, fampiantranoana ary fanaterana ireo tranokalanay, vokatra ary serivisy; mitarika marketing (ohatra hanomezana anao doka lasibatra miaraka amin'ny fanekena sahaza); fikirakirana ny fandoavana, ny mailaka ary ny fanatanterahana ny baiko; fitantanana fifaninanana; manao fikarohana sy analytics; ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa.
Marketing amin'ny mpiara-miasa sy ny antoko fahatelo. Azontsika atao ny mampahafantatra ny fampahalalana amin'ireo mpiara-miasa, mpiara-miasa, ary antoko fahatelo (ohatra, mpivarotra antsinjarany, mpanao dokambarotra, masoivoho dokambarotra, tamba-jotra sy sehatra fanaovana dokam-barotra, orinasam-pikarohana ary orinasa hafa) izay tsy voarakitr'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity ny fomban'izy ireo ary hiasa ho mpanara-maso. Ireo antoko ireo dia mety manome, manolotra, manatsara, mivarotra ary mifampiresaka aminao momba ny vokatra sy serivisin'izy ireo manokana. Hanontany ny fanekenao talohan'izay ianao alohan'ny hisehoana izany.
Mpanohana sy fanentanana miaraka . Indraindray izahay dia manolotra atiny na programa (ohatra: fifaninanana, tsinontsinona, fampiroboroboana, na fampidirina ao amin'ny tranokala sosialy) izay tohanan'ny na miaraka amina marika amin'ny antoko fahatelo. Noho ireo fifandraisana ireo dia manangona na mahazo fampahalalana avy aminao ireo antoko fahatelo rehefa mandray anjara amin'ilay hetsika ianao. Tsy voafehinay ny fampiasan'ny antoko fahatelo an'ity fampahalalana ity. Manentana anao izahay hijery ny fampahafantarana momba ny tsiambaratelo an'ny antoko fahatelo toy izany mba hianatra momba ny fampiharana ny angon-drakitra alohan'ny handraisanao anjara amin'ilay hetsika.
Ireo tranonkala mifandray . Ny tranonkala sasany dia misy rohy mankamin'ny tranonkala hafa, ao anatin'izany ny tranokala media sosialy. Azontsika atao ny mampifandray ireo interface programme media sosialy na plug-ins ('Plug-ins') amin'ny tambajotra sosialy, ao anatin'izany ny Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ary ny hafa, ao amin'ny tranokalanay. Ny plug-in dia mety hamindra ny mombamomba anao ao amin'ny sehatr'ilay Plug-in nefa tsy misy hetsika ataonao. Ity fampahalalana ity dia mety misy ny laharan'ny famantarana ny mpampiasa sehatra, tranokala misy anao, sy maro hafa. Ny fifampiresahana amin'ny Plug-in dia handefa fampahalalana mivantana amin'ny tamba-jotra sosialy ao amin'ny Plug-in ary mety ho hitan'ny hafa amin'io sehatra io ny fampahalalana. Ny plug-ins dia fehezin'ny politikan'ny fiainana manokana momba ny sehatra tsirairay, fa tsy amin'ny politikantsika.
Tanjona fampiharana ny lalàna sy lalàna . Azontsika atao ny mamoaka ny fampahalalana ho setrin'ny fizotry ny lalàna, ohatra ho valin'ny didim-pitsarana na taratasy fiantsoana, na ho valin'ny fangatahan'ny maso ivoho mpampihatra lalàna. Azontsika atao ihany koa ny mampahafantatra an'izany Fampahalalana izany amin'ny antoko fahatelo: (i) ho fiarovana ny hosoka sy ny fihenan'ny trangan-trosa, (ii) izay inoantsika fa ilaina ny manadihady, misoroka, na mandray andraikitra manoloana ny hetsika tsy ara-dalàna, (iii) hampihatra ny zonay nateraky ny fifanarahana nifanaovanareo sy izahay, ao anatin'izany ny Fepetra fampiasana, ity politika ity, ary ho an'ny faktiora sy ny fanangonana, (iv) raha mino izahay fa ilaina na mety ny fampahafantarana mba hiarovana ny zonay, ny fanananay na ny fiarovana anay na izay ny mpanjifantsika, mpampiasa, mpifanaraka na olon-kafa, (v) araka izay takian'ny lalàna.
Fifandraisana Marketing sy fizarana amin'ireo antoko fahatelo. Raha nisoratra anarana handraisana gazety sy / na fampahalalana momba ny marketing ianao, dia manana fotoana hisafidianana ny safidinao momba ny fahazoana fifandraisana ara-barotra avy aminay, ary ny fizarana Fampahalalana amin'ireo mpiara-miasa ho an'ny tanjon'izy ireo mivarotra mivantana.
Azonao atao ny manavao ny safidinao momba ny fahazoana fifandraisana amin'ny varotra sasany avy aminay, ary ny fizarantsika ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fifandraisanao aminay privacy@ligseruveni.com . Azonao atao ihany koa ny misafidy ny tsy handray serasera marketing amin'ny mailaka, amin'ny fanarahana ny torolàlana 'tsy hisoratra anarana' omena ao amin'ny mailaka rehetra azonao avy aminay. Azonao atao ihany koa ny manamboatra ny fampandrenesanao manosika amin'ny fitaovanao finday amin'ny alàlan'ny fanamboarana fitaovana na fampiharana anao.
Safidy doka . Mety hiara-miasa amin'ny antoko fahatelo izahay hanolotra doka, ary hirotsaka amin'ny fanangonana angona, fitaterana, famakafakana an-tranonkala, fandefasana doka ary fandrefesana ny valin'ny tranokalanay sy amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo ary ny fampiharana rehefa mandeha ny fotoana. Ireto antoko fahatelo ireto dia mety hampiasa cookies, fanilo Internet, piksela ary teknolojia hafa mitovy amin'izany hanatanterahana an'io asa io. Azon'izy ireo atao ihany koa ny mahazo fampahalalana momba ny tranokala vangianao, ny rindranasa ampiasainao, ary ny fampahalalana hafa avy amin'ny fitetezana anao sy ny fitaovanao mba hanolorana dokam-barotra izay azo ampifanarahana amin'ny tombotsoanao amin'ny tranokalanay sy amin'ireo sehatra hafa. Ity karazana doka ity dia fantatra amin'ny hoe dokambarotra miorina amin'ny fahalianana, ary mety hampiasaina hampifandraisana ireo mpitety tranonkala sy fitaovana isan-karazany amin'ny fanaovana dokam-barotra sy famakafakana mifototra amin'ny fahalianana.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny dokam-barotra miorina amin'ny zanabola eo amin'ny biraonao na ny telefaona finday, ary ny fahafahanao misafidy ity karazana dokam-barotra ataon'ny antoko fahatelo ity dia tsidiho azafady Ny safidinao amin'ny Internet ary / na ny EDAA Hetsika mifehy ny tena amin'ny fanaovana doka amin'ny fitondran-tena an-tserasera . Azafady mba mariho fa ny safidy opt-out azonao ampiharina amin'ny alàlan'ireto programa ireto dia tsy hampiharina afa-tsy amin'ny dokam-barotra miankina amin'ny zana-bahoaka ataon'ny antoko fahatelo nofidinao. Azonao atao ihany koa ny manohy mandray doka, saingy mety tsy dia misy ifandraisany amin'ny zavatra mahaliana anao ny fanaovana doka.
Mety manana safidy betsaka kokoa ianao miankina amin'ny système d'exploitation na ny findainao. Ny ankamaroan'ny rafitra fiasan'ny fitaovana dia manome ny torolalany manokana momba ny fomba hampihenana na hanakanana ny fanaterana ny doka anaty fampiharana ampanjifaina. Azonao atao ny mandinika ny toe-javatra miafina ao amin'ny rafitra fiasa toy izany mba hianaranao ny famerana ny dokam-barotra mifanaraka amin'ny fampiharana. Azonao atao ihany koa ny manafoana ny fampahalalana marina momba ny toerana avy amin'ny fitaovana finday amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny findainao ary misafidy ny hametra izany fanangonana izany.
Cookies sy teknolojia hafa . Izahay sy ireo mpiara-miasa aminay, mpamatsy tolotra antoko fahatelo ary mpiara-miombon'antoka dia afaka mandefa 'cookies' amin'ny solo-sainanao na mampiasa teknolojia mitovy amin'izany hanatsarana ny traikefa an-tserasera amin'ny tranokalanay sy amin'ny alàlan'ny dokam-barotra sy haino aman-jery manerana ny Internet sy ny fampiharana finday.
Cookies dia rakitra an-tsoratra kely misy fampahalalana izay alaina ao amin'ny fitaovanao rehefa mitsidika tranokala iray ianao, ao anatin'izany ny tranokalanay. Averina any amin'ny fonenan'ny tranonkala ny cookies avy eo amin'ny fitsidihanao manaraka an'io sehatra io. Ny ankamaroan'ny pejin-tranonkala dia misy singa avy amin'ny sehatra web maro ka rehefa mitsidika tranokala iray ianao dia mety hahazo cookies avy amin'ny loharano maromaro. Ilaina ny cookies satria mamela tranokala hahafantatra ny fitaovan'ny mpampiasa izy ireo. Ny cookies dia mamela anao hitety tranokala mahomby, hahatadidy ny safidinao ary hanatsara ny fiainanao amin'ny ankapobeny. Izy ireo koa dia azo ampiasaina hanamboarana ny dokam-barotra ho an'ny zavatra mahaliana anao amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fizahanao amin'ny tranokala. Ny cookies cookies dia hofafana ho azy rehefa manidy ny browser-nao ianao ary mijanona ao amin'ny fitaovanao foana ny cookies maharitra rehefa mikatona ny browser (oh: mahatadidy ny safidin'ny mpampiasa anao rehefa miverina amin'ny tranokala ianao).
Azontsika atao koa ny mampiasa pixel na 'web beacons' izay manara-maso ny fampiasanao ireo tranokalanay. Web beacons dia rakitra elektronika kely tafiditra ao amin'ireo tranokala na ny fifandraisanay (oh: mailaka) mamela antsika, ohatra, hanisa ireo mpampiasa nitsidika ireo pejy ireo na nanokatra mailaka na ho an'ny statistika hafa mifandraika amin'izany. Azontsika atao koa ny mampifangaro ny 'Software Development Kit' ('SDKs') ao anatin'ny rindranay mba hanatanterahana asa mitovy amin'ny cookies sy ny fanilo amin'ny Internet. Ohatra, ny SDK dia mety manangona fampahalalana ara-teknika sy fampiasana toy ny famantarana ny fitaovana finday sy ny fifandraisanao amin'ny tranokala sy ny fampiharana finday hafa.
Azontsika atao koa ny mampiasa cookies sy teknolojia hafa (i) mba hanomezana, hampivelatra, hikolokoloana, hanokana ho an'ny olona, ​​hiarovana, ary hanatsara ny tranokalanay, ny vokatra, ny programa ary ny serivisy ary ny hampandehanana ny orinasanay, (ii) hanao analytics, ao anatin'izany ny famakafakana sy tatitra momba ny fampiasana sy ny fahombiazan'ny tranokalanay ary ny fitaovan'ny marketing, (iii) hiarovana amin'ny, hamantatra, ary hisorohana ny fisolokiana sy ny hetsika tsy ara-dalàna hafa, (iv) hamoronana angona angon-drakitra momba ireo vondrona na sokajy mpampiasa anay, (v) hampifanarahana ireo mpampiasa manerana ny fitaovana, mpiara-miasa, mpiara-miasa ary mifidy antoko fahatelo, ary (vi) ho anay sy ny mpiara-miasa aminay, mpiara-miasa aminay ary mifidy antoko fahatelo hitodihana, hanolotra, na hivarotra, vokatra, programa na serivisy. Ny cookie sy ny haitao hafa koa dia manamora sy mandrefy ny fahombiazan'ny doka aseho amin'ny na alefa aminay na / na aminay na / na tambajotra na tranokala hafa.
Tsy mamaly ireo fambara Do Not Track izahay amin'izao fotoana izao satria mbola tsy nisy fenitra teknolojia mitovy amin'izany. Manohy mandinika ireo teknolojia vaovao izahay ary mety handray fenitra raha vao noforonina ny iray.
Mitantana Cookies sy Teknolojia hafa.
IRETO cookies dia ilaina mba hahafahanao mivezivezy amin'ireo tranokala sy mampiasa ireo endriny. Raha tsy misy ireto cookies ireto dia tsy azo omena ireo serivisy nangatahinao (toy ny fitetezana ny pejy). Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Mampiasa ny cookies an-tserasera izahay mba hamakafaka ny fomba ampiasain'ny mpitsidika ny tranokala sy hanaraha-maso ny zava-bitany. Io dia ahafahantsika manome traikefa avo lenta amin'ny alàlan'ny fanaingoana ny fanoloranay sy hamantarana haingana sy hamahana ireo olana rehetra mitranga. Ohatra, azontsika atao ny mampiasa cookies fampisehoana hijerena izay pejy malaza indrindra, izay fomba fampifandraisana eo anelanelan'ny pejy no mahomby indrindra, ary hamaritana ny antony mahatonga ny pejy sasany mandray hafatra diso. Azontsika atao koa ny mampiasa ireto cookies ireto hanasongadinana lahatsoratra na serivisy tranokala heverinay fa hahaliana anao miankina amin'ny fampiasanao ireo tranokala. Ny fampahalalana nangonin'ireto cookies ireto dia tsy mifandraika amin'ny mombamomba anao manokana avy aminay na amin'ireo mpifanaraka aminay ary ampiasaina amin'ny endrika agregato sy voafaritra ihany. Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Tsindrio eto raha hijery ny politika momba ny tsiambaratelo Google momba ny Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Azonao atao ny miala amin'ny fanarahana ny Google Analytics amin'ny alàlan'ny fitsidihana: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .
Mampiasa cookies izahay mba hanomezana anao fampiasa sasany. Ohatra, ny fijerena ny atin'ny horonan-tsary, ny stream mivantana, na ny hahatsiarovanao ny safidy nataonao ary hanomezana endrika manatsara sy manokana anao manokana. Ireo cookies ireo dia tsy ampiasaina hanarahana ny fizotranao amin'ny tranokala hafa. Ity tabilao manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Ny cookies amin'ny dokam-barotra (na ny cookies kendrena) dia manangona vaovao momba ny fahazarana mivezivezy mifandraika amin'ny fitaovanao ary ampiasaina hampisy fifandraisan-davitra kokoa aminao sy amin'ny zavatra tianao. Ireo cookies ireo dia mandrefy ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokam-barotra ary manara-maso raha naseho tsara ny doka. Azonao atao ny miditra amin'ny EU Consent Manager amin'ny tongotry ny tranokala raha tianao ny manova ny safidinao. Ity lisitra manaraka ity dia mampiseho ohatra vitsivitsy amin'ireto karazana cookies ireto:
Tsindrio eto raha hijery ny politika momba ny tsiambaratelo Google momba ny DoubleClick https://policies.google.com/privacy?hl=en
Ny dokam-barotra Cookies amin'ny tranokala mifandray
Ny dokam-barotra Cookies dia azo ampiasaina amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy izay mifandraika amin'ny tranokalanay, toy ny bokotra 'Share' na mpilalao audio / video voapetraka, ankoatry ny fanomezana ireo fiasa nangatahina. Ireo tranokala media sosialy dia manome ireo serivisy ireo ho setrin'ny fanekena fa ianao (na ny marimarina kokoa nomen'ny fitaovanao) dia efa nitsidika tranonkala sasany. Ireo tranonkala media sosialy toy izany dia mametraka ny cookies amin'ny dokam-barotra rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao ary rehefa mampiasa ny serivisin'izy ireo ary mivezivezy lavitra ny tranokalanay. Ny fanao cookie amin'ny sasany amin'ireo tranokala media sosialy dia voalaza etsy ambany:
Politikan'ny cookie an'ny Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Politikan'ny Cookie ao amin'ny Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
Politikan'ny cookie an'ny Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Politikan'ny cookie an'ny Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/cookies
Politikan'ny Cookie an'ny YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Politika Cookie SoundCloud: https://soundcloud.com/pages/cookies
Politika Cookie Google Plus: https://policies.google.com/technologies/cookies
ZONAO MBOLA HANATSARATRA, HANARITRA ARO HAMONO NY INFORMATION ANAO
Zonao ny mangataka aminay ny kopian'ny fampahalalana anao, hanitsy azy io, hamafa azy na hametra ny fikirakirana azy ary hahazoana ny fampahalalana nomenao. Azonao atao ihany koa ny mangataka aminay handefa fampahalalana sasantsasany izay nomenao tamin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny elektronika.
Azonao atao ny manohitra ny fanodinana ny mombamomba anao manokana arakaraka ny tombontsoantsika ara-dalàna. Izay nangatahanay ny fanekenao hanodinana ny fampahalalana dia manan-jo hisintona an'io fanekena io ianao amin'ny fotoana rehetra.
Raha manana olana tsy voavaha ianao dia manan-jo hitaraina amin'ny manam-pahefana fiarovana angon-drakitra UE izay misy anao, toerana iasanao na toerana inoanao fa nisy ny fandikan-dalàna. Fantaro azafady fa misy maningana miavaka amin'ny fampiharana ireo zony ireo ary mety tsy ho azonao atao ny mampiasa ireo zony rehetra ireo amin'ny toe-javatra rehetra.
Ireo zon'olombelona ireo dia iharan'ny fitsipaham-bola sasany hiarovana ny tombotsoam-bahoaka (ohatra ny fisorohana na ny fahitana heloka) sy ny tombotsoantsika (ohatra ny fitazonana ny tombontsoa ara-dalàna). Amin'ny tranga sasany, mety hidika izany fa afaka mitazona ny mombamomba anao izahay na dia esorinao aza ny fanekenao. Hamaly ny ankamaroan'ny fangatahana izahay ao anatin'ny iray volana.
Azonao atao ny misoratra anarana amin'ny mailaka na mailaka fampiroboroboana isan-karazany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fikitihana ireo rohy 'tsy hisoratra anarana' omena amin'ny fifandraisana toy izany. Mety tsy hiala amin'ny serasera mifandraika amin'ny tranokala ianao, toa ny fanamarinana kaonty, ny fanamafisana ny fividianana ary ny hafatra momba ny fitantanana raha mbola misoratra anarana amin'ireo tranokala ianao.
Ny fe-potoanan'ny fitazonana anay ho an'ny angon-drakitra manokana dia miankina amin'ny filan'ny orinasa sy ny fepetra takian'ny lalàna. Izahay dia mitazona ny angon-drakitra manokana raha toa ka ilaina amin'ny tanjona fikarakarana izay nanangonana ny angon-drakitra manokana sy izay tanjona hafa azo ekena sy mifandraika amin'izany. Ohatra, mitazona antsipirian'ny fifanakalozana sasantsasany sy ny fifanoratana izahay mandra-pahatapitry ny fotoana voafetra nipoitra avy amin'ny fifampiraharahana, na mba hanarahana ny fepetra takian'ny lalàna momba ny fitazonana ny angona toy izany.
Nampihatra fepetra ara-teknika sy fandaminana mifanaraka amin'izany izahay mba hiantohana ny fikirakirana ny angon-drakitra manokana. Ireo fiarovana ireo dia miovaova arakaraka ny fahatsapana, ny endrika, ny toerana, ny habetsany, ny fizarana ary ny fitehirizana ireo angona manokana, ary misy ny fepetra natao hitehirizana ny angon-drakitra manokana arovan'ny fidirana tsy nahazoana alalana.
Izahay dia mametra ny fahazoana miditra amin'ny angon-drakitra manokana ho an'ny mpiasa sy ny antoko fahatelo izay mitaky ny fahazoana mombamomba izany amin'ny tanjona ara-dalàna sy ara-dalàna.
Ny mpiasa ato aminay, ny mpifanaraka ary ny antoko fahatelo izay manana ny angon-drakitra momba ny torolalanay dia tsy maintsy tsiambaratelo ary mampiasa fifehezana fidirana izahay mba hamerana ny fidirana amin'ireo olona izay mila izany fidirana izany amin'ny fanatanterahana ny andraikiny sy ny asany.
Manana ny politikam-baovao momba ny fiarovana izahay ary anaovana fanaraha-maso matetika ny politika sy ny rafitra fiarovana azy. Raisinay am-pitandremana tokoa ny fiarovana ireo fotodrafitrasa IT eto amintsika.
Na dia mandray fepetra araka ny antonony aza izahay mba hiarovana ny mombamomba anao manokana dia tsy afaka miantoka ny fiarovana ny mombamomba anao izahay. Ny fampitana fampahalalana manokana amin'ny alàlan'ny Internet sy ireo sehatra finday dia tsy azo antoka tanteraka, ary noho izany, ny fampitana ny mombamomba anao dia mety hitanao fa mety. Tsy tompon'andraikitra amin'ny familiana ny toe-javatra miafina na fepetra fiarovana izahay.
Miankina aminao koa ny fiarovana sy fiarovana ny mombamomba anao. Izay nomenay anao (na ny toerana nofidinao) tenimiafinao hidirana amin'ny faritra sasany amin'ny tranokalanay, dia tompon'andraikitra amin'ny fitazonana tsiambaratelo an'ity tenimiafinao ity ianao. Tsy tokony hizara olon-kafa ny teny miafinao ianao.
Azontsika atao ny manavao ny Politikanay indraindray. Hampahafantatra anao izahay momba ny fiovana ara-materialy amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity amin'ny alàlan'ny fametrahana fampandrenesana amin'ny tranokalanay. Mamporisika anao izahay hijerena tsindraindray ary hijery ity Politika ity mba hahafantaranareo ny fanovana tato ho ato.
Ahiahy momba ny fiainana manokana . Raha manana ahiahy ianao na fitarainana momba ny tsiambaratelo amin'ireo tranokala, azafady mifandraisa aminay ao amin'ny Hundeshagen Digital Media, LLC., Attn: Legal Affairs, Pacific Design Center, Red Building West, 750 N. San Vicente Blvd., 9thFloor, East Hollywood, CA, 1312312, Etazonia na mailaka aminay amin'ny privacy@ligseruveni.com. Hanao izay tsara indrindra vitany izahay hamaly anao ara-potoana sy matihanina mba hamaliana ireo fanontanianao sy hamahana ny olanao.
© Hundeshagen Digital Media, LLC. Zo rehetra voatokana. Hundeshagen sy ligseruveni.com dia mari-pamantarana voasoratra anarana ao amin'ny Hundeshagen Digital Media, LLC
fifangaroan'omby sy terrier mifangaro
Boston terrier sy Chihuahua afangaro amidy
hazo amboadia mpiandry ondry alemaina Mix
bernese tendrombohitra alika mpiandry ondry alemaina Mix alika kely
dachshund pomeranian afangaro alika kely hamidy